Volvo China Open Tour Tournament
Volvo China Open ayaa qayb ka ah jadwalka tartanka Yurub tan iyo 2005tii, waxaana lagu soo bandhigay Asia Tour. Tartanka waxaa markii hore la ciyaari jiray 1995 waxaana soo qabanqaabiya Ururka Xiriirka Shiinaha ee China. Waa 72 godad istaroog ah.
Alexander Bjork ayaa dalbaday daloolka soo socda ee ugu dambeeyay, isagoo ku guulaystay finalka, waxaana uu ku guuleystay hal guul oo China ah. Bjork waxay ku dhammaatay 18 jir ka yar 270 sano; Adrian Otaegui ayaa ku guuleystay tartankii orodka.
Waxay ahayd guushii ugu horreysay ee European Tour ee Bjork.
Alexander Levy ayaa ku guuleystay ciyaaraha si uu u noqdo champion-ka ugu horeeya ee China Open. Levy, oo sidoo kale ku guuleysatay 2014, ayaa ka adkaaday Dylan Frittelli ciyaartii ugu horeysay ee ay la ciyaartay kooxda Frittelli. Taasi waxay ka dambeysay kadib markii labaduba ay dhamaysteen xeerka 17-aad ee ka hooseeya 271-ka. Daqiiqadii ugu danbeysay ee 67-aad ayaa lagu soo oogay Frittelli 74-dii. Waxa uu ahaa kii afaraad ee Levy ee ku guuleestay tartanka European Tour.
Sannad ka dib markii Wu Ashun uu ku guuleystay tartankan si uu u noqdo guushii ugu horreysay ee Shiinaha ah ee Dalxiiska ee Yurub ah, xiddig kale oo Shiinaha ah ayaa magaciisa ku daray liiska ku guuleystay. Li Haotong ayaa riday finalkii wareega ugu danbeeyay ee wareega ugu danbeeya ee wareega group-ka ee wareega group-yada.
Shiinaha Open Records Records:
72 godood: 264 - Nicolas Colsaerts, 2011
18 godood: 61 - Jamie Donaldson, 2011
Shiinaha Open Golf Koorsooyinka:
Sanadkii 2012, tartanku wuxuu u guuray Binhai Lake Golf Club ee Tianjin, oo ah koonfur bari ee magaalada Beijing.
Kooraska ayaa la furay sannadkii 2011, oo ay soo bandhigtay Schmidt-Curley Design. Tartanka waxaa lagu ciyaaray gudaha iyo hareeraha Beijing iyo Shanghai taariikhda taariikhda, iyada oo kooxda Shanghai Silix Golf Club iyo Beijing International Club Club ay ugu badnaan noqdaan goobaha martida loo yahay.
China Open Trivia iyo Notes:
Markii Nicolas Colsaerts uu ku guuleystay tartankan 2011, waxay ahayd guushii ugu horeysay ee uu ku guuleysto Belguim Turki ah tan iyo markii uu Phillipe Toussaint ku guuleystay 1974 Benson iyo Hedges Festival.
Laga soo bilaabo aasaaskii 1995 ilaa 2016, wax gool ah kuma uusan helin China Open laba jeer. Laakiin sannadkii 2017, Alexander Levy ayaa ku guuleystay guushii labaad ee halkan.
Shiinaha Open ayaa hal mar ciyaaray isla xilli ciyaareedkii hore ee Yurub. Euro Tour ayaa loo isticmaalay in la isticmaalo "sanad maaliyadeed," taasoo macnaheedu yahay xilli-ciyaareedkeedu ma aysan dhicin January-Dec. sanadka taariikhda laakiin waxaa lagu ciyaaray (tusaale) Oktoobar ilaa taariikhda Oktoobar. Sannadkii 2006-da waxay bilaabatay dhamaadkii 2005tii. Xilli ciyaareedkii 2006, Shiinaha Open ayaa la qabtay November 2005. Kaddibna tartanku wuxuu bedelay taariikhda, horay u soo maray sanadkan, sidaas darteed mar labaad ayaa la ciyaaray Abriil 2006. Sidaas darteed labo jeer isla xilli.
Wu Ashun, oo ku guuleystay 2015, ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Shiinaha ah ee ku guuleysta tartanka European Tour oo lagu ciyaaray Shiinaha.
Abaalmarinta Volvo China Open:
2010 - YE Yang, 273
Koorasyada Hoose ee Maraykanka ee Open Open
British Open Play-ka
PGA Tour Doral Open: Taariikhda iyo Guuleystayaasha
Maxay 'MDF' u taagan tahay dhibcaha Golf?
PGA Tour TourerBuilder Challenge
LPGA Tour Race to CME dhibcaha dhibcoodka CME
1965 Koobka PGA: Marr Staves Off Nicklaus, Casper
Helitaanka Augusta, Georgia, iyo Masters
Goolasha Hore Iyadoo Looga Badbaadiyay LPGA Majaajilo
7 Qodobbada Motrational-ka ah ee Lagu Imtixaamo Intaan Baadhitaanka Badan
Dalladaha dib loo soo celiyo
Open de France (Faransiiska Open): Bandhigga Golf ee Tour Touristic ee Yurub
Faafaahinta Bogga ee Maxkamadda Darajada Cajiibka ee Arbacada: Daqliga sare
Iskuulada Seattle Pacific University Admissions
Waa maxay Agnosticism?
Xuquuqda Sharci ee Ardayda Pagan
Persepolis (Iiraan) - Magaalo caasimadda ah ee Boqortooyada Faaris
Akhriska Qiimaynta Ingiriisiga Heerka Sare
Sidee Ayay Qoysasku U Helaan Dibloomada?
Waa maxay sababta "Anne of Green Gables" laga yaabaa inay Dabeysato Buugga Ugu Muhiimsan ee Taariikhda
Tusaale Kala beddelka Koolejka
Cyrus McCormick, Soo-saaraha Mashiinka Mashiinka Mashiinka
5 Sababta Aan Ahayn Aargad Aan Lahaa (Hase yeeshee)
Iskuulada Campbell University
Top 40 Muusikada Muusikada Ah
Xaqiiqooyin Ku Saabsan Ilaah Olympian - Hermes
Ciriiriga iyo Cirqiga Jacaylka
Iskoolada sare ee Iskoolada Atlantic iyo jaamacadaha
20 Sawiro sawiro khatar ah
Tiger Woods 'Yacht: Waa maxay Magaca, Cabbirka iyo Kharashka?
Waa maxay sababta Dareemka Dareemku u Dubaan?